မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ်: အပျိုလေးများ အလိုရှိသည်
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 20:52
Anonymous 19 April 2008 at 21:09
စိုးထက် - Soe Htet ! 20 April 2008 at 11:14
ကောင်းတယ် သန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း တိုး ချဲ့ လိုက်၇င် ပို အဆင်ပြေမယ် :)
စိုးထက် - Soe Htet ! 20 April 2008 at 11:15
၀န်ဆောင်မှု လို ရေးတာ :P
နှင်းစက်မိုး 20 April 2008 at 12:04
yaung ma yaeeeee..
I am single girl..
မေမိုးမခ 21 April 2008 at 19:01
မေမိုးလဲပဲ တစ်ယောက်တည်းပဲ။ ဟိဟိ ကိုးရီးယားသွားရင် ဟိုင်းကုန်ကျတာနော် လူတိုင်းလိုလိုပါဘဲ ဟိဟိ!!!! နောက်တာနော်။